SOMALITALK - XODAY
Soomaalidu Wax Maqorto waxna ma aqriso Majirtaa?
W/Q: Cabdisamad Xoday
Waxaa jirta oraah oranaysa Soomaalidu waa ''Oral society'', dad hadla aanse wax qorin waxna akhrin. Haddaba, maxaa ka jira arrintaas, saamayn intee le’eg bayse ku leedahay bulshada?.
Dhammaan dadka diraaseeya cilmiga bulshadu waxay isku waafaqsanyihiin in bulsho walba uu garaadkedu ku dhisanyahay hadba inta ay aqoonteedu le'egtahay. Ummad walba oo uu hooseeyo heerkeeda aqooneed, waxaa hubaal ah in garaadkeeda, wacyigeeda, wax-soosaarkeeda iyo fursadda ay u leedahay siijiritaanka mustaqbal ay hoosayso.
Hiraal cad iyo higsi muuqda oo bulshadaasi ay yeelatana ay ku xirantahay, koboceeda aqooneed.
Waxay arrintaas ummaduhu kala midyihiin qofka shakhsiga ah, iyo sida ay aqoontu u saamayso heerkiisa garsho, garaadkiisana u kordhiso, darajada uu bulshada dhexdeeda ku leeyeheyna kor ugu qaaddo.
Haddaba waxaa mudan in la is weydiiyo: waa tee isha aqoonta laga helaa? Ama haddaan si kale u dhigo: waynu ognahay oo qofna aqoonta kuma dhashee, miyey kusoo degtaa? mise maahee aqoontu waa wax ay ummadiba ummad ka dhaxashay, jiil walbaana soo gaarsiiyo kan ku xiga? Qoran oo ku jira diiwaanno iyo kutub ay jiilashii hore ku tiir iyo tacabbeeleen?. Arrintaasi danbe ayaa sax ah.
Dadyowga aduunka joogaa aqoonta way wadaagaan, xaqiiqada cilmiga oo ka timid bari, waxaa laga isticmaalaa bugux, tan waqooyi lagasoo tabiyeyna waxaa laga helaa koonfurta aduunka, Sidaas Caksigeedna waa sax.
Habka ugu da,da weyn, uguna mugga iyo baaxadda weyn ee ay aqoontu ku socoto, bulshooyinkuna ay ku kala helaan, aqoonta, tijaabooyinka nolosha, taariikhda waayihii lasoo maray, suugaanta iyo hal-abuurka waa habka (qoraal & akhris).
Soomaalida iyo wax qoridda & wax akhrinta
Haddaba oraahda aynu horay kusoo tibaaxnay ee oranaysa soomaalidu waa ummad hadasha oo aan waxna qorin waxna akhrin, ma saxbaa mise waa khalad?.
Arrintaasi haddii aan diraasad iyo is barbardhig ku sameeyey -nasiib darro- waxaa ii caddaatay, in ay ilaa xad, sax tahay. Waxaa jira boqollaal soomaali ah oo Prof. Eng. PhD. wada ah, maxay wax u qori waayeen? haddii aad damacdid, inaad carruur soomaaliyeed oo qurbaha joogta, ka caawisid af-soomaaliga, mushkiladda koowaad oo ku helaysaa waa yaraanta qoraallada ku qoran af-soomaaliga, ama waxaaba laga yaabaa inaadan helin, wax buugaag ah oo ku qoran af-soomaali.
Maxaadse ula yaabaysaa, yaa akhrisanaya oo ay wax u qoraan, waxbaba ma akhrinee? Ninbaa waxaa la sheegaa inuu yiri: afar iyo tobankiyo boqolka quraanaka (114-ka suuradood) baan dusha ka aqaanaa, markaasuu kii uu u sheegayey ku yiri oo yaa kaa akhrisanaya?, waa sidaas tan haysata maanta ciddii soomaali wax u qor is tiraahda, waana tan ku kalliftay aqoonyahano badan oo soomaaliyeed inay afaf qalaad wax ku qoraan.
Haddii aad tareen (Train) kasoo raacdid magaalo adoo u socda magaalo kale, waxaa tareenka kula soo fuulaya dad aad u fara badan, hase yeeshee maqli maysid wax qaylo iyo sawaxan ah, qofwalbaa wuxuu boorsadiisa kalasoo baxayaa buug, majallad ama joornaal, wuxuuna soo rogayaa meel u calaamadsanayd oo uu akhriskiisu u joogey, halkaas ayuuna kasii wadanayaa. Haddiise aad bas (Bus) ama baabuur lasoo raacdid 6 qof oo soomaali ah, waxaa hubaal ah, inaad dhagaha faraha gashanaysid, qaylada iyo sawaxanka halkaas ka yeeraya. Taasi waa marag ma doonto.
Haddaba waxaa hubaal ah in arintaasi ay tahay, mushkilad ijtimaaci ah, oo haysata ummadda soomaaliyeed aynatahay in ay xallinteeda iska kaashadaan dhammaan aqoonyahanka soomaaliyeed, meel ay joogaanba.
Sidee mushkiladaas wax looga qaban karaa?
Sidee kor loogu qaadi karaa kartida wax qorid - akhris ee qofka iyo bulshada soomaaliyeed?
Waa maxay dhibaatooyinka ay arrintaasi ku hayso qofka iyo qaranka soomaaliyeed?
Waxaan jeclaan lahaa in qof walba oo soomaali ah, oo arrintaas wax ka og, ama aqoon u leh, amase doonaya inuu fikrad iyo dareen ka dhiibto inuu fikraddiisa ii soo diro, Aadna waan uga mahad celindoonaa,markii ay fikrado mowduucaas ku saabsan isoo gaaraana waxaan ballan qaadayaa inaan idiinsoo bandhigo doono insha allaah..
Faafin: Ogost 2004